Medallia: hatsarao ny traikefan'ny mpanjifa B2B | Martech Zone
Medallia: hatsarao ny traikefan'ny mpanjifa B2B
Alarobia, Novambra 13, 2013 Alarobia, Novambra 13, 2013 Douglas Karr
Ny fahazoana sy ny fanarahana ny kalitaon'ny traikefan'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny dia nanjary sarotra kokoa satria ny mpanjifanao dia mikitika faritra maro samihafa ao amin'ny fikambanana misy anao. Miaraka amin'ireo mpivarotra mampiasa rindrambaiko lead-and-contact, ireo fitaovana fampahalalana tsy manjary ireo dia tsy lafo fotsiny sy tsy mahomby, fa afaka manamboatra saika tsy azo atao mihitsy ny manana fomba fijery feno momba ny mpanjifa sy ny zavatra niainany niaraka tamin'ny orinasanao.
Ekipa mpivarotra dia afaka mahatakatra amin'ny fomba mandaitra kokoa ny olan'ny mpanjifa rehefa afaka mahita fomba fijery mitambatra amin'ny karazan-kevitra rehetra, manambatra fahafaham-po ankapobeny / fifandraisana fijerena fanadihadiana amin'ny fahafaham-po amin'ny tsirairay amin'ireo teboka ifanakalozan-kevitra lehibe izay iombonan'ny mpanjifa.
Medallia ny Manolotra an'io ny tolotra B2B vaovao. Manome anao mihoatra ny topimaso fotsiny ny fahitan'ny mpanjifanao ny zavatra niainany. Mahazo sary feno ianao, ny fomba fijery iray manontolo ny zavatra iainan'ireo mpanjifan'ny mpanjifanao rehetra. Ny tombony amin'ity fijery ity? Izy io dia manasongadina ireo fotoana lehibe fanatsarana izay misy eo amin'ny departemantan'ny departemanta, fotoana fanatsarana izay, na dia miharihary amin'ny mpanjifanao aza, dia mety hidona eo anelanelan'ny triatra ao anaty orinasa B2B.
Ny vahaolana avy any Medallia manangona hevitra avy amin'ny lafiny rehetra an'ny mpanjifa tranokala, toerana, fanohanana, varotra mivantana, na ny fifandraisan'ny mpiara-miombon'antoka — ary avy eo dia manoratra izany tamberina izany ao anaty rafitra iray mitambatra izay manome ny orinasanao fijery tsy miova amin'ny departemanta rehetra. Tsy mamela ny departemanta hitanao fotsiny ny ampahany amin'ny orinasa iandraiketan'izy ireo; Izy io dia ahafahan'ny ekipa kaontinao hahatakatra ny hevitr'izy ireo amin'ny ambaratonga kaonty ary hahafahan'ny mpitantana anao hahatakatra ny sary manontolo ny zavatra niainan'ny mpanjifanao.
Tags: faharanitan-tsain'ny mpanjifa b2bfahafaham-po ny mpanjifa b2bmedaly
Playnomics: Mpampita sarobidy amin'ny fampiharana ny finday (AVP)